Umhlaba unelizwekazi le-8 elibizwa ngokuba yi-Zealandia - Ezintsha
Eyona Ezintsha Kubonakala ngathi uMhlaba unamazwekazi ayi-8 ngoku, kuba yonke into oyaziyo bubuxoki
Kubonakala ngathi uMhlaba unamazwekazi ayi-8 ngoku, kuba yonke into oyaziyo bubuxoki
I-Zealandia, ilizwekazi elitsha, eliboniswe ngwevu.N. Mortimer et al./GSA Namhlanje
Kulungile wonke umntu, pakani iincwadi zenzululwazi kwaye nikrazule iimephu zehlabathi phantsi kweendonga zokufundela. Lixesha lokususa lonke uncwadi oluthi iAfrika, iAntartica, iAustralia, uMzantsi Melika, uMntla Melika, iYurophu neAsia (okanye iEurasia) zezona zwekazi kuphela, kuba kuyabonakala ukuba yonke into esiyaziyo bubuxoki.
Kuyacaca ukuba kukho amazwekazi asibhozo kwiplanethi yoMhlaba. Ndiyazi ukuba ucinga ntoni: Kodwa sihlolisise iplanethi yonke! Ivela njani elinye ilizwekazi? Ewe, eli zwekazi litsha linobuqhophololo, elibizwa ngokuba yi-Zealandia, ngokwenene belizimele emehlweni ngeli xesha liphela.
Kude kube ngoku, iNew Zealand kunye neNew Caledonia zithathelwe ingqalelo njengezixokelelwano zeziqithi, kodwa isifundo esitsha kuqweqwe loMhlaba kutyhilwe ukuba zombini ezi zinto ziyinxalenye yesiqwengana selizwekazi. Ewe ewe, oku kuthetha kanye le nto uyicingayo-eneneni kukho amazwekazi asibhozo (okanye kwizazi zejoloji ezijonga iAsia neYurophu njengelinye ilizwekazi eligama linguEurasia, zisixhenxe endaweni yesithandathu).
Oku ayikokufumanisa ngesiquphe kodwa kukuqonda ngokuthe ngcembe; kutsha nje kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ngesingenalo ulwazi oluqokelelweyo okanye ukuzithemba ekutolikeni ukubhala eli phepha, abaphandi babhale kwijenali ye-Geological Society of America.
Abantu ngokubanzi bajonga amazwekazi ukuba makhulu kakhulu, ahluke ngokucacileyo umhlaba ohlukaniswe ziilwandlekazi, kodwa ngobuchwephesha, iimpawu ezine eziphambili ezenza into kwilizwekazi elinento yokwenza noku: 1) ukuphakama, 2) ulwakhiwo lwenqanawa, 3) ukwakheka komhlaba kunye no-4 indawo iyonke kunye nemida yolwakhiwo. Isityhilelo sangoku sokuba indawo ekuthethwa ngayo ibumba ilizwekazi linento yokwenza nenombolo yesine kolu luhlu.
Ngelixa umbono we-Zealandia wawuphakanyisiwe kwi-1995 kwaye iimfuno zokuqala ukuya kwezintathu zazitsaliwe, ngoku kuphela kwesi sifundo sitsha kuye kwakho ubungqina obaneleyo bokuxhasa ukuba lilizwekazi. Sebenzisa imephu yolwandle yamandulo kunye neenkcukacha ezinomtsalane zakwaselwandle zamandulo, abaphandi besifundo esitsha bakwazi ukubonisa ukuba i-Zealandia ngenene iyinxalenye yommandla omanyeneyo omkhulu ngokwaneleyo ukuba ungathathwa njengelizwekazi. Ngokwenene zizigidi ezili-1.89 zeekhilomitha ezizikwere, malunga nobukhulu beIndiya enkulu.
Kodwa linda, ezinye zazo ziphantsi kwamanzi? Ewe, kodwa iseyinxalenye yobunzima obumanyeneyo. Kwaye kukho ezinye izihlwele ezikhulu ezimanyeneyo, akunjalo? Ewe, kodwa abayi (njengophando lwanamhlanje) ukuhlangabezana nezinye iimfuno ezintathu ngokunjalo.
I-Zealandia ayilufanelanga nje uluvo lwethu lokuba ilizwekazi likhangeleka njani ngenxa yokuba licuthiwe, landisiwe kwaye ligxunyekwe ziitetoniki zeplate kwizigidi zeminyaka, ngokweesampulu zamatye kunye nedatha. Ngapha koko, ziipesenti ezintlanu kuphela ezibonakalayo, sisizathu sokuba kuthathe ixesha elide ukuyifumana. Kodwa nangona kunjalo, kubonakala ngathi lilizwekazi. Kwaye iiglobe zakho kunye neemephu azincedi nganto.
Oososayensi bathi ukufumanisa kwayo kuya kuba luncedo olukhulu kuphando oluqhubekayo.
I-Zealandia ibonisa ukuba inkulu kwaye icacile kwisayensi yendalo inokungahoywa, lifunda inqaku lephephancwadi. Ixabiso lezenzululwazi lokuhlela i-Zealandia njengelizwekazi lingaphezulu nje kwegama elongezelelweyo kuluhlu. Ukuba ilizwekazi linokuntywiliselwa kodwa libe lingaqhekezwanga lenze ukuba libe lilungu elinamandla nelichukumisayo nelicingela amandla ekuphononongeni ubumbano kunye nokuqhekeka komhlaba.
Funda ngakumbi malunga neziphumo Apha .
(h / t NdiFucking Uthando lweNzululwazi )
U-Lupita Nyong'o uthi 'I-Black Panther 2' isavakalelwa kukuba ilungile ngokweemvakalelo
Iidemokhrasi zinokubulela uHarry Reid ngenketho yeNyukliya yeGorsuch
'Umfazi Olungileyo' Ixesha le-7 yeNkulumbuso yokuBuyisa: Ukutshaya iRoomba
Ukulinganiswa kwe-nfl yeqela liqela
izongezo eziphezulu zokunciphisa umzimba
Ixesha legazi eliyinyani 7 isiqendu 7
iiphakheji yosuku lwe-valentine yosuku lwe-nyc
umfazi olungileyo ixesha lesi-7 isiqendu se-16